Soomaali walaac ka muujisay dilalka K/Afrika
Muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool dalka Koonfur Afrika gaar ahaan Magaalada Cape Town oo warbaahinta gudaha la hadlay ayaa waxa ay sheegeen in ay walaac ka muujinayaan dilalka dhalinyarada Soomaaliyeed loogu geysto dalkaasi.
Waxa ay sheegeen mar walba in ay ku nool yihiin cabsi iyo cakirnaan la xiriirta dhanka nolosha, maadaama burcada Koonfur Afrikaanka ah dilalka ay Soomaalida u geysanayaan sii kordhayaan.
Sidoo kale waxa ay sheegeen cabsidooda in ay sii xoogeysatay, kadib markii Todobaadkii aynu soo dhaafnay dalka Koonfur Afrika, gaar ahaan baadiyaha lagu dilay Saddex dhalinyaro Soomaaliyeed, inkastoo Booliska ay arrintaasi baaritaano ku hayaan.
Anikow Zakaria waxa uu ka mid yahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku ganacsata Koonfur Afrika, waxa uu ka hadlayaa dhibaatada ay ku nool yihiin.
“Waqti kasta aan ma ahan halkan, nolosha had iyo jeer waa khatar, sababtoo ah Soomaali aan walaalo nahay ayaa halkan lagu dilay, shaqada halkan aad ayaay u dhib badan tahay waayo mar walba waa dareen ku joog”.
Ali Hassan oo Muwaadin Soomaaliyeed ah kana mid ah dhalinyarada ku ganacsatata Koonfur Afrika waa 18 sano jira, Saddex sano ka hor ayuu yimid Koonfur Afrika, waxa uu ka hadlayaa nolosha ay ku nool yihiin isaga iyo Soomaalida kale.
“Halkan ayaan ku nool nahay ma lihin dooq, maxaa yeelay waxaan joognaa dal halistiisa ay badan tahay, maadaama la bartilmaameedsado dadka soo galootiga ah gaar ahaan Soomaalida,
Soomaali fara badan oo intooda badan ah dhalinyaro wiilal ah ayaa ku nool Koonfur Afrka, kuwaasi oo halkaasi u tagay ganacsi, waxaana ay la kulmaan midab takoor iyo sidoo kale dilal, oo ay geysanayaan burcada madow ee Koonfur Afrikanka ah.